Ukubanjwa kweenyawo e-China
Imbali kunye neNkcubeko EMpuma Asia
Imbali yeeLindi Ukubopha eChina
Kwiminyaka emininzi, amantombazana aseChina ayephantsi koluhlungu kunye nenkqubo ephosakeleyo ekuthiwa yiyo inyawo ebophayo. Iinyawo zabo zaziboshwe ngokuqinileyo ngamacwecwe, kunye neenzwane zijike phantsi kwelo lunyawo, kunye neenyawo ezibophelelwe ngaphambili ukuya kwinqanaba ukwenzela ukuba likhule libe yindonga ephakamileyo. Umlenze omdala ongeyena omdala uza kuba ngamasentimitha amathathu ukuya kwezine ubude. Ezi zinyawo ezincinci zaziwa ngokuba "ngeenyawo ezininzi."
Imfashini yokubopha inyawo yaqala kwiiklasi eziphezulu zesizwe saseTshayina, kodwa isasazeka kubo bonke kodwa kwiintsapho ezihluphekayo. Ukuba nentombi eboshwe ngamanyathelo ibonisa ukuba intsapho yayisisityebi ngokwaneleyo ukuyeka ukusebenza kwakhe emasimini-abafazi abaneenyawo zabo bebengenakuhamba kakuhle ngokwaneleyo ukuba benze naluphi na uhlobo lwabasebenzi olubandakanyekayo ukuma naluphi ubude bexesha. Ngenxa yokuba iinyawo eziboshwe zibhekwa njengezinto ezintle kunye nemvelo, kwaye ngenxa yokuba zibonisa ubutyebi obuphathekayo, amantombazana "aneenyawo zeenyawo" ayengakwazi ukutshata kakuhle. Ngenxa yoko, kwanezinye iintlobo zeefama ezingenakukwazi ukulahlekelwa ngumsebenzi wabantwana zibopha iintombi zabo ezindala zizithembele ekuthandeni abacebileyo abantombazana.
Imvelaphi yokuLinda kweenyawo
Iingoma ezahlukahlukeneyo kunye neentlobo ezinxulumene neenkcukacha zihambelana nomvelaphi weenyawo ezibophayo eChina. Ngenye inguqu, umkhuba ubuyela kumnqophiso wokuqala woxwebhu, i- Shang Dynasty (c.
1600 BCE ukuya ngo-1046 BCE). Uxhaswa, umbusi wokugqibela okhohlakeleyo waseShang, uKumkani uZhou, wayenomfazi ogqithandayo obizwa ngokuthi nguDaji ozelwe nge-clubfoot. Ngokomxholo, uDaji onokudabuka wayala abafazi beenkundla ukuba babophe iintombi zabo kwiinyawo ukuze babe yincinci kwaye ibe yinto enhle njengeyakhe. Ekubeni uDaji wachaswa kwaye wafa, kwaye i-Shang Dynasty yawa ngokukhawuleza, kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba izenzo zakhe zaziza kusinda iminyaka engama-3 000.
Ibali elithile elincinci lichaza ukuba umbusi uLi Yu (ulawulo luka-961 ukuya ku-976 CE) we-Southern Tang Dynasty wayenomfazi ogama linguYa Niang owenza "umdaniso we-lotus," ofana ne- pointe ballet . Wazibopha iinyawo zakhe zibe yinto engummiselo we-silk emhlophe ngaphambi kokudansa, kwaye ubabalo lwakhe lwaphefumlela ezinye iibhokhwe kunye nabasetyhini abaphezulu ukuba balandele. Kungekudala, amantombazana eneminyaka emithandathu ukuya kweyesibhozo ayenamathele abo ezinqabini.
Njani iCandelo lokuQinisekisa kweZilwanyana
Ngexesha leNtshukumo yeeNgoma (960 ukuya ku-1279), ukubopha ngeenyawo kwaba yinkcubeko esekwe kwaye isasazeka kulo lonke elaseMpuma yeChina. Kungekudala, umfazi wesinye isizwe waseHinina woluphi uhlobo lwentlalo kulindeleke ukuba abe neenyawo ezinyawo. Izicathulo ezimnandi kunye nezicathulo ezimbini zokubopha iinyawo zaziwa, kwaye ngamanye amaxesha abantu basela iwayini kwizicathulo ezincinci zeentanda zabo.
Xa amaMongol aphanga iNgoma aze azalise iDynasty ye-Yuan ngo-1279, athathe amasiko amaninzi aseTshayina-kodwa angayibopheli unyawo. Abafazi abaninzi baseMongol nabanamaqela abazimeleyo abazange banomdla wokukhubaza ngokusisigxina iintombi zabo ukuba zihambisane nemigangatho yaseShayina yobuhle. Ngaloo ndlela, iinyawo zabesetyhini zaba ngumqondiso osheshayo wobuzwe boluntu, ukwahlula isiHan Chinese kumabhinqa aseMongol.
Kwakunjalo xa u- Manc olwahlula uMing China ngo-1644 waza wamisa iKing Dynasty (1644 ukuya ku-1912). Amantombazana aseManchu ayevunyelwe ngokomthetho ukubopha iinyawo zawo. Sekunjalo isithethe saqhubeka somelele phakathi kwezifundo zabo zesiHan.
Kwisiqingatha esiphelileyo sekhulwini leshumi elinesithoba, abavangeli basemazweni abasentshonalanga kunye nabesifazane baseTshayina baqala ukubiza ukuphela kweenyawo-ukubopha. Abalingisi baseTshayina abathonywe yiNtlalo yaseDarwin babethisa ukuba abafazi abakhubazekile babeza kubangela abantwana abangenabuthathaka, bengozi baseTshayina njengabantu. Ukukhuthaza abantu basemzini, uManchu Empress Dowager Cixi wagxotha lo myalelo kwisigqibo sika-1902, emva kokusilela komntu onxamnye nomntu ongaphandle. Ukuvinjelwa kwangoko kwachithwa.
Xa i-Qing Dynasty yawa ngo-1911 ukuya ku-1912, urhulumente onguNationalist wagqitywa unyawo-lubopha kwakhona.
Ukuvinjelwa kwakusebenza ngokufanelekileyo kwizixeko zonxweme, kodwa ukubopha ngeenyawo kwaqhubeka kungabikho kwiindawo ezininzi ezisemaphandleni. Umkhwa wawungekho ngaphantsi okanye ngaphantsi utyinwe ngokupheleleyo kude kufike amaKomanisi aphumelele ukulwa kweMfazwe yaseTshayina ngo-1949. U- Mao Zedong kunye noorhulumente wakhe baphatha abafazi njengamaqabane amaninzi alinganayo kwiinguqulelo kunye nokukhawuleza ukukhishwa ngamanyathelo kulo lonke ilizwe kuba kubaluleke kakhulu ukunciphisa inani labasetyhini njengabasebenzi. Oku kwakunjalo nangona abafazi abaninzi bezinyawo beboshiweyo bebenze i- Long March ngemikhosi yamaKhomanisi, behamba ngamamayela angama-4 000 kwiindawo ezinemizila kunye nokukhusela imifula kwiimilenze ezide ezi-3 intshi.
Ngokuqinisekileyo, xa uMao ekhuphe ukuvinjelwa kwakukho izigidi zamabhinqa eziboshwe ngeenyawo eChina. Njengoko kudlule iminyaka emininzi, kukho ezimbalwa kwaye zimbalwa. Namhlanje, kunabantu abancinci besetyhini abahlala ngaphandle kwimihlaba yabo engama-90 okanye ngaphezulu abahlala bebophe iinyawo.
Yin-Yang: Ngaba UnguYin okanye U-Yang?
Amasiko aseShayina: Ukuhlangana nabantu abatsha
Japan | Iinkcukacha kunye neMbali
King Sejong Omkhulu waseKorea
IziTyhuna zeTshayina eziLungileyo
Ngoobani abantu baseKachin?
Isihlandlo soBomi bukaMao Zedong
Ukunikezelwa kwezipho zaseTshayina: Izinto ezingathengi
Imbali emfutshane ye-Opera yaseChina
I-Greatest Ninja Battle, 1581
Indlela Yokwenza Abasebenzi Bomsebenzi
Uziva Ubuhlungu? Funda ezi ngxelo ezibuhlungu ngobomi
I-Occidental College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Iqela leMidlalo: Ukuzonwabisa ngokuSandi kunye nokuThetha kwamazwi
Ukukhubazeka kweGalufa: Ziziphi iindawo zokudlala
I-DIAZ Igama lomntu igama kunye nomthombo
Iindidi zoNcedo lwezeMali zabaFundi abaFundile
Ngaba iLoch Ness Monster ngokwenene iLizwe eliPhezulu?
Ukunika izikhokelo zesiTshayina
Imvume Yemisebenzi Yesikhashana yabasebenzi baseKhanada
Top Serial Killer Movies
I-Augusta University Admissions
Bona iNdlela eYilungileyo yaseSpain
AbaPhambili beeNgesi zee-80s
Uphando lwezobuGeni usebenzisa i-Bureau yeeNkcazo zoLuntu lwaseNdiya
I-Jack Nicklaus Career Winners
UVernon Elliott: I-Greatest Pool Hustler
KwiBritish Open FAQ
Udlala njani i-Slap Bass
I-Analogy yobuxoki (Ubuxoki)
Yintoni ebalulekileyo kweKemistri kwiBomi bemihla ngemihla?
Yintoni i-Mihrab kwi-Architecture yama-Mosque yamaSulumane?
Yintoni kwiTanki yokuThambisa iScuba?
Imbali yamaTempile amaHindu